Hyundai Zhonghe Company ari kushingaira kuita zvesayenzi uye kugadzira zvinhu, kukura, unhu chisikwa, musika kuwedzera, uye tarenda kusikwa kuti kuvakwa mana mikuru zvirongwa, kuti modernize Zhonghe Company rive mazuvaano management, muchiso internationalization, chigadzirwa ano, uye okutengesa kudyidzana . The kambani anoedza kuva enyika vaitungamirira nokutengesa maindasitiri zvigadzirwa.
"Made in China 2025" kuisa mberi, vanoomerera kuti "utsanzi-nemhepo, unhu wokutanga, mutema kukura, STRUCTURAL Optimization, tarenda vaifarira" inokosha negwaro. China mukugadzira 2025, ndiye pekusadziviririka kuchinja uye upgrading kuti China kuti kugadzira maindasitiri, mune tarisiro huru munyika, Shandong Qingyun muchina mudziyo Protective Cover Manufacturing Co., Ltd., Shandong Qingyun Modern Qing Tai Spring Manufacturing Co., Ltd., Shandong Central German Intelligent Electrical Manufacturing Co., Ltd., Qingdao Grand Green Wind simba New Energy Development Co., Ltd. Yantai US-Asia Dege Environmental Protection Technology Co., Ltd., Shandong Hao Xing Tatsu Pipe Fittings Industrial Co., Ltd. anorenda rinoumbwa Shandong Hyundai Sinobo nemazvo Machinery Manufacturing Co., Ltd. Pachishandiswa ano, refu kukoshesa. Tichifunga inorambidza kuti Bottleneck uye simba kubatana kwakaita mukugadzira kukura, rikurumidze kushandurwa uye upgrading uye kunatsiridza uye kunyatsoshanda, chinoumba makwikwi uye inogona kuenderera mberi mano mukugadzira bhizimisi vawedzerwe. Zvakarurama kunzwisisa rwakapoteredza idzva zvesayenzi uye kugadzira zvinhu, chimurenga uye mumaindasitiri shanduko muitiro, simbisa inokosha kuronga uye ramangwana nekutumirwa kwemauto, pasi-to-pasi nheyo, mune ramangwana makwikwi kugara mutungamiri dzakakwirira. The ano Sinobo kambani iri kuita kukura zvesainzi, unhu muchiso, musika kukura, tarenda kusika mana makuru zvirongwa, kuitira kuvaka boka kuva ano utariri, muchiso internationalization, chigadzirwa maonero, yokutengesa kudyidzana pakati mazuvaano pakati emakambani uye kuedza kuva kutungamirirwa maindasitiri zvigadzirwa zvenyika kwazvo bhizimisi. Modern Sinobo vanhu mumweya "inodziya, zvakaoma, pragmatic, zvichikwira" kutenda, noushamwari vatengi zvitsva nezvitsaru kumba uye kunze kutungamirira